Idzi ndidzo, kwandiri, gumi dzakanakisa 10D Kubata maekisesaizi | IPhone nhau
MunaGunyana 2014, Apple yakaunza iyo Force Kubata, mhando nyowani yechiratidziro iyo yaisiyanisa kumanikidza kwakasiyana, kuti ikwanise kuita zviito zvakasiyana pachiratidziro chidiki seicho cheApple Watch. Gore rakatevera kwakauya iyo 3D Kubata chidzitiro, chizvarwa chechipiri cherudzi urwu rwechidzitiro chakabva paruoko rweiyo iPhone 6s uye iyo iPhone 6s Plus. Iyo 3D Touch Yakauya nemasaini matsva uye mune ino chinyorwa tichakuratidza akati wandei awo ayo achavandudza kugadzirwa kwako.
Ramba uchifunga kuti, senguva dzose uye kunyangwe vachiverengerwa (zvinongoerekana zvaitika), inotevera runyorwa isina kunyorwa zvichitevedza kukosha. Kune rimwe divi, ndanga ndichisanganisira anotevera masaini sezvo vauya mundangariro, saka pamwe vekutanga ndivo vandinoshandisa zvakanyanya uye vekupedzisira ndivo vandinoshandisa zvishoma pane urwu runyorwa. Une iwo ese pazasi.
1 Yakanakisa 3D Kubata Kwemaoko
1.1 Tsvaga multitasking pasina kudzvanya bhatani repamba
1.2 Iyo keyboard trackpad
1.3 Wona email pasina kumaka sekuverenga (uye nezvimwe)
1.4 Verenga mameseji pasina kutumira Verenga chiziviso
1.5 Wona mafoto online pasina kupinda maari
1.6 Kurumidza kuisa sarudzo dzeWi-Fi
1.7 Kurumidza kutsvaga iyo App Store
1.8 Tweet nekukurumidza
1.9 Govana nzvimbo yangu
1.10 Fonera vaunofarira shamwari
Yakanakisa 3D Kubata Kwemaoko
Tsvaga multitasking pasina kudzvanya bhatani repamba
Izvi, zvimwe, chiratidzo chandinoshandisa zvakanyanya. Kusvika iyo iPhone yakavhurwa Nyamavhuvhu yapfuura, pasina jailbreak isu taigona kungodzokera kuchiratidziro chemumba kana kuwana multitasking kudzvanya bhatani rekutanga kamwe kana kaviri zvakateedzana. Iyo 3D Kubata yakachinja iyo mitemo yemutambo uye inotibvumidza isu kuwana multitasking nekutsikirira zvishoma kuomarara kuruboshwe rweiyo iPhone skrini. Kana tikadzvanya zvishoma, mavara anozofamba zvishoma, zvinozotibvumidza kuchinjira kuchikumbiro chatakange tashandisa ipapo kare kana tikatsvedza tsamba yekushandisa kwazvino kurudyi. Kana tikadzvanya zvishoma, isu tinopinda mukuita zvakawanda, kunyangwe izvo zvandinoita kutsvedza zvishoma kurudyi tisina kusvika kumagumo. Yakakurudzirwa kunyaradzwa kwayo uye nekuwedzera hupenyu hwebhatani rekutanga.
Iyo keyboard trackpad
Kusarudza zvinyorwa paIOS haizi kurota, asi isu takagara tichifunga kuti zvinogona kuvandudzwa. Ndicho chikonzero nei paine tweak muCydia inonzi SwypeSelection inoita zvakanyanya kana zvishoma zvakafanana neiyo trackpad chiratidzo keyboard. Kufambisa iyo cursor pamusoro pechero chinyorwa chatinogona kugadzirisa, isu tinodzvanya iyo skrini zvishoma tobva tatamisa munwe pabhodhi. Kana tikatenderedza pamusoro pezwi ndokutsikirira zvishoma, isu tinosarudza iro, uye kana panguva iyoyo tichifambisa munwe, tinofambisa sarudzo. Icho chinhu chandinoita ndichienderera mberi.
chitsamba: MuGIF iri pamusoro iwe unogona kuona kuti zvaive zvakadii zhizha rapfuura, patinogona kuivhura neminwe miviri senge pane iyo iPad.
Wona email pasina kumaka sekuverenga (uye nezvimwe)
Kune maemail umo, tikangoavhura, tinotumira verenga ziviso. Tingazvidzivisa sei? Zvakanaka, kune nzira dzakawanda, asi hapana inoenderana kana tiine iPhone 6s kana iPhone 6s Plus. Patinogamuchira email, tinogona "kucherechedza" zvirimo nekuita "Peek" chiratidzo. Kana panguva iyoyo tikatsvedza kuruboshwe, tinogona kuzvibvisa. Kana tikatsvedza kurudyi, tinogona kuzvimaka sekuverengwa. Kana tikasvetuka, tichaona izvo zvingasarudzwa. Kana tikadhinda zvishoma, isu tinopinda iyo tsamba sezvatinogara tichiita.
Verenga mameseji pasina kutumira Verenga chiziviso
Mazhinji mameseji manyorerwo anotibvumidza kuti tirege kutumira yekuverenga ziviso, asi izvi zvinogona kuve dambudziko nekuti kumwe kuonana kunogona kutibvunza «Nei uine chiremara? Chii chaunofanira kuvanza? Kana tisingade kupa tsananguro, zvakanaka kuti tisiye ziviso yekuverenga ichiitwa, asi tarisa mameseji nekuita iyo chiratidzo che «Peek». Kunyangwe iOS ichitibvumidza kuona zviziviso pane iyo yekuvharira sikirini kana kubva pamutsara, zvinogona kunge kuti meseji iri refu, saka zvakanakira kubatika uchishandisa iyo 3D Kubata uye kutumira ziviso chete patinenge tichida.
Wona mafoto online pasina kupinda maari
Izvi kuti uone mafoto paInternet usingapinde mairi hapana chimwe kunze kweiyo batanidza preview. Ini ndinofunga kuti kuongorora uku kwakaitwa zvisina kunaka neApple, nekuti dzimwe nguva isu tinongoona musoro wenyaya yechinhu chenhau, kwete senge muMac vhezheni iyo inotibvumidza kufamba kuburikidza nekufanoona uku. Nechikonzero ichocho, ini ndiri kungotaura nezve kufanoongorora mapikicha. Kutiisa mumamiriro ezvinhu, kangani kawakatsvaga mafoto uye pawakapinda mune imwe ndokudzokera iwe wakadzokera pakutanga kwekutsvaga? Ichi chinhu chisingachaitike ne 3D Kubata: patinotsvaga mafoto, tinogona kutsvedza pakati pavo uye kungovheneka pane vatiri kuda kuona. Patinoregedza, tinodzoka kwataive tiri.
Kurumidza kuisa sarudzo dzeWi-Fi
Ini handizive nezvako, asi ndine huwandu hwenzvimbo ina Wi-Fi mumba mangu: maviri muimba yekudyira uye maviri mukamuri rangu, mune mbiri zviitiko imwe yacho iri 5GHz (ndinofarira kuva nayo nenzira iyoyo). Muimba yangu yekurara, ini dzimwe nguva ndakabatana nenzvimbo yangu yekudyira network uye zvinopesana, saka kukwanisa kukurumidza kuwana sarudzo dzeWi-Fi kubva pachiratidziro chekumba chinondibatsira.
Kurumidza kutsvaga iyo App Store
Kangani pazuva iwe waunotsvaga chimwe chinhu mu App Store? Ini vazhinji. Pasina 3D Kubata, isu tinofanirwa kubata iyo App Store icon, ipapo iyo "Tsvaga" tebhu, tobva tabata bhokisi kunyora uye kutanga kutaipa. Tine 3D Kubata tinongoda kutsimbirira zvishoma, sarudza "Tsvaga" wotanga kutaipa. Ichokwadi kuti dzimwe nguva hazvititorere isu kwakanangana nekuunzwa kwechinyorwa, asi ichi chi tsikidzi izvo zvakaitika kwandiri kakati wandei.
Ini handizive nezvako, asi ini ndinoda Twitter. Uye hazvisi zvekuti ini ndinotumira teki zvakanyanya (nemaoko), asi iyo yekupinda kunyorera uye kutendeuka nehafu kuti uwane sarudzo haina kundipa kunakidzwa kwakawanda kana. ndinoshandisa Tweetbot, asi kune zvimwe zvakawanda zvinoshandiswa izvo zvinotibvumidza isu kuti tinyore zvakananga kuumbwa kwetwiti kuti titange kunyora. Izvi zvinotibatsirawo kana tichida tweet pikicha.
Govana nzvimbo yangu
Ichi chinhu chinouya chakanakisa mune chero mhando yechiitiko nevanhu vazhinji: "Uri kupi?" Ini ndinotumira nzvimbo yangu zvakananga kubva kuchiratidziro chekumba uye kune chero chinowirirana chishandiso. Zvakareruka, asi zvinoshanda.
Fonera vaunofarira shamwari
Ndinofanira kubvuma kuti handifonere zvakawanda parunhare, uye pamwe ndicho chikonzero hachisi chinhu chandinoita nekukurumidza. Iko kukurumidza kuwana kwe3D Kubata muPhone application kunotibvumira kusevha kusvika 3 vaunofarira shamwari. Kana isu tichida kufonera mumwe wavo, isu tinongofanirwa ku "Peek" pane iyo foni icon pane yekumba skrini uye kutsvedza kana kubata mumwe wevatatu vatinoda kufambidzana navo.
Iye zvino mubvunzo unomanikidzwa: Ndeapi aunofarira 3D Kubata maekisesaizi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 6s » Idzi ndidzo, kwandiri, gumi dzakanakisa 10D Kubata manenji